Manchester United Oo Heshiis La Gashay Raphael Varane Xilli Ay Go'aan Ka Gaadhay David De Gea - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United Oo Heshiis La Gashay Raphael Varane Xilli Ay Go’aan Ka Gaadhay David De Gea
Manchester United Oo Heshiis La Gashay Raphael Varane Xilli Ay Go’aan Ka Gaadhay David De Gea
July 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Premier League 1
Manchester United ayaa si fiican uga adeeganaysa suuqa iibka ciyaartoyda iyadoon wax waqti ah iska luminayn, waxaana saxeexii Jadon Sancho oo horraantii toddobaadkan ay ku dartay hal saxeex oo kale oo ay muddo raadinaysay oo ay ku xoojinayso difaaceeda.
Red Devils waxay Sancho kasoo bixisay lacag gaadhaysa £73 milyan oo Gini, iyadoo warbaahintuna sheegaysa inuu xidhan doono No. 7 oo looga saarayo Edinson Cavani.
Kaddib markii ay isku hubsatay saxeexa Sancho, Manchester United ayaa waxay u dhaqaaqday difaaca reer France ee Raphael Varane oo ay toddobaadyadii ugu dambeeyey si aad ah uga shaqaynaysay saxeexiisa, iyadoo u xil-saartay qof gaar ah oo hawshaas kaliya ku mashquulsanaa.
Sida uu qoray wargeyska ABC Deportes, Manchester United ayaa ku guuleysatay saxeexa Varane, waxaanay la gaadhay heshiis xor ah dhac oo shan sannadood ah, kaas oo faahfaahintiisana la isla qaatay.
Heshiiska ay Manchester United la gaadhay Varane oo shan sannadood ah ayaa waxa uu sannadkii mushahar ahaan u qaadanyaaa 12 milyan oo Euro oo u dhiganta £10.3 milyan oo Gini.
Laacibkan oo iska diiday heshiis afar sannadood ahaa oo ay u bandhigtay kooxdiisa Real Madrid, uuna ku heli lahaa mushahar 7 milyan oo Euro ah sannadkii, una dhigmaysa £6 milyan oo Gini ayaa aqbalay dalabka United oo lacagta badan leh.
28 jirkan ayuu wargeysku sheegay in labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester United ay xoogaa ku kala duwan yihiin qiimaha, iyadoo Red Devils ay u bandhigtay Los Blancos 45 milyan oo Euro laakiin ay Los Blancos dalbanayso 55 milyan oo Euro.
Real Madrid ayaa hore u dalbanaysay 60 milyan oo Gini, laakiin xaqiiqada ah in uu Varane si xor ah uga tegi doono sannad kaddib ayaa waxay ku qasabtay inay tanaasul ka samayso qiimahaas oo ay hoos usoo dhigto dhigto qiimaha.
Dhinaca kale, David de Gea ayaa la sheegay in uu go’aansaday in uu sii joogo Manchester United inkasta oo ay kooxdu toddobaadkan lasoo wareegtay Tom Heaton, sidoo kalena ay heshiis cusub ka saxeexday Lee Grant.
Copa america noo soo gudbiya waa codsi